Ny oniverisite Oxford no misahana ny fanatanterahana ny vaksiny. 23 tapitrisa euros ho an`i Royaume Uni manokana ny tohana ara-bola. Nanome alalana ihany koa ireo tompon'andraikitra momba ny fikarohana ara-tsiantifika any Allemagne ka ny orinasa Biotech, izay mifandray amin`ny laboratoara Amerikanina, no misahana ny fanatanterahana an` izany.Olona manolo-tena manodidina 18 taona hatramin` ny 50 taona no tadiavina ireo orinasa mba hanaovana izay andrana izay. Amin` ny dingana manaraka dia an-tapitrisana ireo olona ilaina hahafahana manamarina ny fandairana ny vaksiny. 12 hatramin` ny 18 volana ny faharetana ny fahafahana manamarina ny fandairana ny vaksiny iray, hoy hatrany ireo manampahaizana. Marihana fa tany Sina dia efa tamin` ny tapakin` ny volana martsa no nisy andrana vaksiny saingy tsy mbola nivoaka ny voka-pikarohana raha toa ka efa nanao andrana roa samihafa ny tao Etazonia.